John Terry Oo Soo Bandhigay Labada Sababood Ee Frank Lampard U Yahay Doorashada Ugu Fiican Chelsea. - Gool24.Net
John Terry Oo Soo Bandhigay Labada Sababood Ee Frank Lampard U Yahay Doorashada Ugu Fiican Chelsea.
June 26, 2019 Mahamoud Batalaale
Halyaygii hore ee kooxda Chelsea ee John Terry ayaa aaminsan in Frank Lampard uu yahay doorashada ugu fiican ee ay kooxdiisii hore ee Blues heli karto isaga oo ku saleeyay laba sababood oo kala duwan.
Maamulka kooxda Chelsea iyo Frank Lampard ayaa tan iyo shalay qaadanayay wada xaajoodyo lagu doonayo in Lampard uu si rasmi ah u badalo Maurizio Sarri laakiin wada xaajoodyada ayaa noqday kuwo ka waqti dheeraaday sidii laga filayay.
John Terry ayaa ku dooday in marka la eego xaalada ganaaxa suuqa kala iibsiga ee ay CHelsea ku jirto iyo waliba xaaladii fiicnayd ee u Lampard ku soo qaatay kooxda Derby County in ay isaga ka dhigtay doorashada ugu fiican.
John Terry laftiisa oo la filayo in uu qayb ka noqon karo shaqaalaha tababaraha ee Lampard la shaqayn doono mustaqbalka ayaa ku dooday in aanay jirin doorasho ka fiican in Lampard shaqada Chelsea loo dhibaa.
Ugu horayn John Terry oo ka hadlaya sababaha ay tahay in Lampard uu doorashada kowaad ku yahay ayaa yidhi: “Kadib xili ciyaareedkii uu Derby ku soo qaatay iyo ganaaxa Chelsea meesha u yala, ma jiro mid kale oo ka fiican oo ka qalabaysan Frank in uu Chelsea la guulaysto. Waa waqtigii isaga ugu haboonaa”.
John Terry oo ka hadlaya sidii uu Frank Lampard cadaadis u dareemayay maalintii uu Chelsea kaga soo biiray West Ham ayaa yidhi: “Frank waxa uu ku hoos jiray cadaadis maalintii uu West Ham ka yimid si uu Chelsea ula guulaysto, taasna marnaba muu qarsan, waxa uu doonayay in uu noqdo ciyaartoyga abid ugu fiican Chelsea”.
“Anigu marnaba maan rumaysnayn in wax cabsi ahi ay taageerayaasha ka imanayso. Iyagu way jecel yihiin isaga, Lampard waa halyay, haddana waa waqtigii ku haboonaa in uu guriga yimaado” ayuu Terry hadalkiisa sii raaciyay.
John Terry ayaa isbar bar dhigay hamiga dalabka mulkiilaha Chelsea ee Roman Abromovic iyo hamiga dalabka Lampard wuxuuna yidhi: “Roman waa ganacsade guulaystay, sababtoo ah aad ayuu u dalab badan yahay, laakiin Frank ayaa dalban doona wax aan isaga ka yarayn. Lampard wuu soo dhawaynayaa masuuliyadaas si uu Chelsea uga dhigo tartamayaan ka badan iyo in uu bixiyo deganaanta ay kooxdu soo la’ayd”.